Magaalada Jowhar oo ay soo food saartay cabsi kaga imaanaysa Roobab lixaad leh oo ku dhuftay gobolka (DAAWO SAWIRADA) – idalenews.com
Magaalada Jowhar oo ah caasimada gobolka Sh/Dhexe ayaa waxaa baryahaan fara kulul haya roobab lixaad lex oo ku dhuftay guud ahaan gobolka, iyadoo magaalada xaafada ka mid ah laga wada qaxay.
Roobabkaan aadka u lixaadka badan ayaa saameeyn weyn ku yeeshay guryaha iyo ganacsiga iyadoo lagu soo waramayo in Bakhaarada ay biyaha toos ugaleen halka shacabkana ay guryihiiba ka qaxeen.
Xaafada qeybta shanaad oo ka tirsan X. Hantiwadaag ayaa gabi ahaanba guryaha laga wada qaxay markii ay biyuhu si toos ah u abaareen inaay galaan qolalkii lagu hoyanaayey.
Dadka ma haystaan meel ay seexdaan waxayna dermahooda dhigteen meelaha ay is leeyihiin waad kaga nabad galaysaan biyaha daadadka ah ay roobabka keeneen.
Dadkaasi ayaanan haysan hooy iyo cuno iyagoo awalba nolol maalmeedkooda ka raadsan jiray suuqyada magaalada oo aan sidaasi u tiro badnayn, waxaana kasii daran Maleeriyada ay hooyga ka gali jireen oo haatan ay dibadda ugu soo baxeen.
Waxaa dhanka kale is hortaag sameeyey dadka beeraha ku leh aga gaarka magaalada ka dib markii maamulka uu soo saaray amar ah in biyaha magaalada looga saaro matooro laguna shubo beeraha taasoo ay ka biyo diideen dadka leh beerahaasi hase yeeshee loo adeegsaday in Xabsiga la dhigo.
Maamulka magaalada ayaa ku dooday in maal iyo naf ay kala ahmiyad badan yihiin loona baahan yahay in la badbaadiyo shacabka dhibaatada soo gaartay.
Maamulka Gobolka iyo ganacsatada ayaa isku dayey ineey adeegsadaan matooro biyaha looga saarayo xaafadaha ay waxyeelada kasoo gaartay roobabka lixaadka leh ee ka da’ay gobolka.
Si kastaba ha ahaatee gudoomiyaha degmadda Jowhar Maxxamed Amiin oo aan la xiriiray ayaa ii sheegay inuu codsi ugudbinayo hay’adaha gargaarka isagoo ugu baaqay inaay lasoo gaaraan cuno, dawo iyo baco ay roobka ka galaan, halka Jaaliyada gobolka gaar ahaan kuwa kasoo jeeda Jowhar inaay walaalahood la garab istaagaan kaalmo nooceey doontaba ha ahaatee.
Abwaan Da,yar oo Kasoo Dhax Baxay Somalida South Africa (Daawo Gabayo Ku Cajib Galin Doona)